Courtslọ ikpe ndị German nwere ike itinye ọrụ vidiyo vidiyo Apple | Esi m mac
Courtslọ ikpe ndị German nwere ike itinye ọrụ vidiyo Apple
Courtlọ ikpe mpaghara German ekpebiela na Apple megidere ikikere nke ụlọ ọrụ nchekwa nke Switzerland Kudelski (OpenTV) nwetara, nke nwere ike ịmanye Apple iwepu ụfọdụ ihe ntanetị na ọrụ vidiyo Apple ya.
Mkpebi nke ndị ọka ikpe atọ nke ụlọ ikpe mpaghara Duesseldorf kwuru na Tuesday na Apple ga-eweta ngwanrọ na-emebi ikike patent OpenTV, nke na-ekpuchi ngwakọta nke vidiyo, ọdịyo na ozi ịntanetị n'otu iyi vidiyo.
Mkpebi ụlọ ikpe ahụ na-enye Apple nsogbu ka ọ gbasoo nkwekọrịta ikikere ya na ụlọ ọrụ Kudelski, ọ bụ ezie na leviathan nke teknụzụ ndị America nwere ike ịgbaso site na iwepu ma ọ bụ mebie atụmatụ mmebi nke ngwaahịa ngwaahịa vidiyo Apple ya. N'okwu kachasị njọ, ị ga-ewepụ ngwaahịa ndị ahụ n'ahịa.
Ngwaahịa enwere ike imetụta bụ iPhones, iPads, Macs, iTunes music service, QuickTime video player software, na Apple TV - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaahịa ha niile.
Nkwupụta ahụ dịkarịsiri ike ma nwekwaa nke ọma, ụlọ ikpe kwuru na mkpebi Dusseldorf.
O doro anya ma ọ bụrụ na Apple ga-arịọ arịrịọ. Companylọ ọrụ ahụ na-eche ntaramahụhụ ruru € 250.000 maka mmebi iwu ọ bụrụhaala na ọ jụrụ ime, mana mkpebi ahụ egosighi etu a ga-esi gbakọọ mmebi iwu ahụ. Ndị nnọchiteanya nke Apple na Kudelski jụrụ ikwu okwu.
Iwu ụlọ ikpe German ga-amalite ịdị na-arụ ọrụ ozugbo ekwuputara Apple na ederede, ebe OpenTV chọrọ 4 nde euro ($ 4,5 nde) site n'ụlọ ikpe dị ka ego nwere ike ịkwụ ụgwọ maka ọghọm Apple, ma ọ bụrụ na agbanwee mkpebi ahụ na mkpesa.
Apple nwere ike ịrịọ ụlọ ikpe mkpegharị nke mpaghara maka ịrịọ nke mmanye, nke a na-enwetakarị n'ime izu, wee rịọ mkpebi maka uru dị n'ụlọ ikpe ahụ. Nke a ga - ewetara gị ọtụtụ isi ọwụwa na ọrụ vidiyo nke Apple.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Courtslọ ikpe ndị German nwere ike itinye ọrụ vidiyo Apple
Njehie na nkọwapụta nke ngwa ahụ gosipụtara na iPads ọhụrụ ga-adaba na Apple Pencil